८ मंसिर, काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलले ‘इन्कम ग्यारेन्टेड फण्ड’ लगानी व्यवस्थापन योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजनामा सहभागी हुन न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । नियमित आय आवश्यक पर्ने, जोखिम लिन नचाहने, अवकाश प्राप्त र गृहिणीलगायत लगानीकर्तालाई मध्यनजर गर्दै योजना सञ्चालनमा ल्याएको क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । यस योजनाअन्तर्गत लगानीकर्ताहरूले वार्षिक १०.२५ प्रतिशत निश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्ने एनआईसी एशिया क्यापिटलको दाबी छ ।…विस्तृत समाचार »
घट्यो सुन र चाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार
७ मङ्सिर २०७८
७ मंसिर, काठमाडौं । साताको तेस्रो दिन आज ९मंगलबार० नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला एक हजार ६ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९२ हजार तीन सय रुपैयाँ कायम भएको हो । तेजाबी सुन प्रतितोला ९१ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ । चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १५ रुपैयाँले घटेर एक हजार २५५ रुपैयाँ कायम…विस्तृत समाचार »
बढयो सुन र चाँदीको मूल्य
६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य ९३ हजार ९०० तोकिएको छ । त्यसै गरी तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ । सुनको मूल्य हिजोको तुलनामा आज प्रतितोला २०० रुपैयाँले बढेको हो । त्यस्तै चाँदीको मूल्य प्रतितोला १० रुपैयाँले बढेर एक…विस्तृत समाचार »
५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणनुसार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार ७०० तोकिएको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन हिजो प्रतितोला रु ९४ हजार ४०० मा कारोबार भएको थियो । जसअनुसार सुनको मूल्य ७ सय रुपैयाँले घटेको हो । तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार २०० रुपैयाँ कायम…विस्तृत समाचार »
प्राइम र प्रभु बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा, क–कसले किन्न पाउँछन् ?
३ मंसिर, काठमाडौं । योसँगै कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको नेपाल ग्रामीण विकास लघुवित्तको ३५ हजार कित्ता सेयर समेत लिलाम गर्ने भएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम २२५ रुपैयाँमा प्राइम बैंक, २०५ रुपैयाँमा प्रभु बैक र ३५० रुपैयाँका दरले ग्रामीण विकास लघुवित्तको सेयर न्यूनतम रुपैयाँ भाउ राखेर आवेदन दिन सक्नेछन् । यो सेयर खरिदका लागि विद्यमान संस्थापकहरु वा जो कोही व्यक्ति, कम्पनी, संघ, संस्थाहरुले आवेदन दिन…विस्तृत समाचार »
३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलामा १०० रुपैयाँ घटेको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन ९४ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ९४ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै तेजावी सुन तोलाको ९३ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको मूल्य पनि आज घटेको…विस्तृत समाचार »
​ब ढयो सुनको मूल्य ,कतिमा हुदैछ कारोबार ?
२ मंसिर,काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलामा २०० रुपैयाँ बढेको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन ९४ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ९४ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै तेजावी सुनको मूल्य ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै चाँदी तोलामा १ हजार २८० रुपैयाँमा…विस्तृत समाचार »
घटयो सुनचाँदीको मूल्य
१ मंसिर, काठमाडौं । सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन ५०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९४ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो प्रतितोला ९४ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको थियो । तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको महसंघले जनाएको छ । चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १० रुपैयाँले घटेर एक हजार २८० रुपैयाँ कायम…विस्तृत समाचार »
२९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली बजारमा साताको दोस्रो दिन आज सोमबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तीन सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९४ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको हो । तेजाबी सुन आज प्रतितोला ९३ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ । चाँदीको मूल्य पनि आज घटेको छ । चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँ घटेर एक हजार २८० रुपैयाँ…विस्तृत समाचार »
बढ्यो सुनको मूल्य, यस्तो छ आजको बजार भाउ
२८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली बजारमा साताको पहिलो दिन आज आइतबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला ९४ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएकोमा आज दुई सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९४ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको हो । तेजाबी सुन आज प्रतितोला ९४ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ । चाँदीको मूल्य पनि आज बढेको छ ।…विस्तृत समाचार »